Fampandrosoana an’i Madagasikara Tsy maintsy arahina finoana
Fandaharan’asa FEC faha-4 Famatsiam-bola 43,8 dolara no azon’i Madagasikara
Vita tany Washington tamin’ny zoma 22 martsa farany teo ny fivorian’ny filan-kevim-pitantanan’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI) izay nankato ny fandaharan’asa ara-toekarena tohanan’ny famatsiam-bola FEC (Facilité Elargie de Crédit).
Orinasa Malagasy Tokony hatokisan’ny mpanjifa
Navoaka omaly alakamisy 21 martsa tetsy amin’ny hotely Ibis Ankorondrano ny valin’ny fanadihadiana nataon’ny Facto Saatchi&Saatchi sy ny ATW ny amin’ny filaharan’ny orinasa Malagasy arakaraky ny fitiavan’ny mpanjifa.
Fikirakirana vola anaty finday Nampandroso be an’i Kenya
Tamin’ny taona 2007 i Kenya no nampiasa voalohany ny fikirakirana vola anaty finday (mobile banking). Izany dia vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny orinasa Vodafone sy ny orinasan-tserasera tany antoerana Safaricom.
Fisotroan-toaka Efa lasa fomba amam-panaon’ny Malagasy
Mifamatotra amin’ny fomba amam-panao sy kolontsaina ary ny andavanandrom-piainan’ny Malagasy na an-kafaliana na an-karatsiana ny toaka amin’ny ankapobeny.
Orinasa afaka haba ao Antsirabe Mpiasa 4 000 mety ho very asa
Orinasa afaka haba iray miodina ao Antsirabe no ahiana hikatona noho ny resaka tsy fifanarahana tamin` ny tompon-trano nofainy (contrat de bail). Ny taona 2007 no nanao taratasim-pifanarahana fa hanofa ny trano niasany ny orinasa afaka haba iray ary haharitra 9 taona izany.
Fijanonana ao anatin’ny Frankofonia Tena ilain’i Madagasikara tokoa ve?
Isaky ny 20 martsa tahaka izao no hanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Frankofonia.
Mpiasan’ny orinasa SIRAMA « Mandainga ny Kaompania Vidzar »
Mandainga sady manely tsaho ny kaompania Vidzar hoy ireo mpiasa eo anivon’ny Orinasa SIRAMA nandritra ny atrikasa nataon’izy ireo tany Brickaville. Nilaza mantsy ny teo anivon’ny Kaompania fa mandeha araka ny tokony ho izy ny orinasa SIRAMA.
Omaly alarobia 10 oktobra no nampahafantarina tetsy Mandrimena Tanjombato ny fampandrosoana ara-toekarena tanterahina amin’ny lafiny finoana sy vavaka ataon’ny fikambanana Mpitory teny Mpitandrina Mpanompo (3M).
Nanambara ny fikambanana fa tompon’andraikitra voalohany eto Madagasikara izy ireo ny amin’ny fampiroboroboana ara-toekarena indrindra ny amin’ny fampielezana ny filazantsara. Tamin’ny oktobra 2017 dia nisy ny fampivoarana ny fambolena araka ny tatitry ny tompon’andraikitra voalohany ny 3M, Faly Ravoahangy. Ny vina dia ny hitady sy hanofana an’ireo olona nantsoin’Andriamanitra amin’ny sehatra fanompoana mba hiverina tanteraka amin’ny baiboly izy ireo. Misy ny hetsika iraisam-pirenena momba ny toriteny mirakitra fanazavana ny tenin’Andriamanitra (sommet international de la prédication textuelle). Antony anaovana ny hetsika ny hanentanana ny olona rehetra misehatra amin’ny fitandremana sy ny fampianarana ny tenin’Andriamanitra mba hiverina tanteraka amin’ny baiboly. Tsy tokony hivaona amin’ny tenin’Andriamanitra ny mpino amin’ny fanazavana ny olona ny amin’ny baiboly na dia mihamaro hatrany aza ny antokom-pivavahana sy ny fiangonana eto amin’ny firenena.